Murasha Xasan Sheekh iyo Xisbigiisa oo deeq gaarsiiyey agoon caruur iyo darbi jiif ah - Xusuus
Monday, 25 June, 2012 I Latest Update 9:12 am Home
Home Wararka Wararka maanta
Murasha Xasan Sheekh iyo Xisbigiisa oo deeq gaarsiiyey agoon caruur iyo darbi jiif ah
By: xusuus, Post on:25 June, 2012, Share this story
Xisbiga Nabadda iyo horumarka ee PDP ayaa maanta deeq isugu jirta Joodariyaal, buugaag , qalimaan iyo raashinka Qutul daruuriga ah gaarsiiyey Caruur isugu jirta Dabijiif, agoon iyo sidoo kale kuwo danyar ah oo lagu xanaanaynayo qeybo ka mid ah degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Xisbiga nabadda iyo horumarka ahna musharaxa u taagan qabashada xilka Madaxtinimo ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud iyo xubno sare oo ka tirsan Xisbiga PDP ayaa maanta gaaray goob caruurtaasi wax lagu baro oo ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Markii ay halkaasi gaareen ayaa waxaa guddoomiyaha Xisbiga nabadda iyo hurmarka waxa uu warbixin ka dhagaystay guddoomiyaha Xarunta ay ku jiraan Caruurtaasi dhibaataysan ee wax lagu baro.
Yaasiin Cabdullaahi Galayr oo ah guddoomiyaha Xarunta dadkaasi agoonta ah ay ku jiraan ee Somali Children Care Organization (SOMCCO) oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in fikirka caruurtan darbi jiifka ah, iyo kuwa agoonta ah lagu soo uruurinayo ay leeyihiin dhallinyaro Arday ah oo wax ka barata yaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir.
Wuxuu sheegay in haatan ay gacanta ku hayaan 30 caruur ah oo darbi jiif ah oo aan aabe iyo Hooyo aan meel ku sheegin islamarkaan ay waxbaraan halkaana ay jiiftaan, isagoo uga mahaceliyey Xisbiga nabadda iyo horumarka ee PDP deeqda ay maanta gaarsiiyeen.
Guddomiyaha Guddoomiyaha Xisbiga nabadda iyo horumarka ahna musharaxa u taagan qabashada xilka Madaxtinimo ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbigiisa uu sii dar dar galinayo howlaha ama rajada ay u bilaabeen caruurtan, dhallinyarada Soomaaliyeed.
Mid ka mid ah caruurta halkaasi ku jira oo mar weydiiyey Guddoomiyaha Xisbiga nabadda iyo horumarka Xasan Sheekh Maxmuud waxa uu u qabanyo haddii uu ku guuleysto xilka Madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu balan qaadayo inuu muhiimadda koowaad siinayo caruur Soomaaliyeed, islamarkaana waxa uu sheegay in Caruurta ay yihiin dadkii badali lahaa.
Ugu dambeyn waxa uu baaq u diray cid kasta oo caruurtaas waxbaridooda iyo xanaanadooda gacan ka geysan karta, isagoo ka codsaday in cidii awoodda ay gargaar la soo gaaraan caruurtan dhibaataysan.
Xisbiga nabadda iyo hurmarka waxa uu ka mid yahay xibiyada siyaasadeed ee Dalka ka jira waxaana dhowr jeer oo hore deeqo kala duwan uu gaarsiiyey dad dhibaataysan iyadoo la xusuusto kaalintii uu ka qaatay Nadaafadda Muqdisho
Mu’tamarkii 8-aad ee Ahlunna waljamaaca ee qaarada yurub oo ka furmay Stockholm Sweden. Mu’tamarkii8-aad ee ahlusunna ee ka socday Stockholm Sweden oo caawa la soo gabagabeeyey Bayaana laga soo saaray. Categories
Wararka, Wararka maanta Tags
xusuus Add a Comment on "Murasha Xasan Sheekh iyo Xisbigiisa oo deeq gaarsiiyey agoon caruur iyo darbi jiif ah"